खुल्यो रहष्य !! सिक्किमका नविन गजमेरलाई कोचले नछान्नुको भित्री कारण त यस्तो पो रहेछ .. ( भिडियो हेर्नुस ) – Nepal Trending
खुल्यो रहष्य !! सिक्किमका नविन गजमेरलाई कोचले नछान्नुको भित्री कारण त यस्तो पो रहेछ .. ( भिडियो हेर्नुस )
On १४ आश्विन २०७६, मंगलवार ०९:२४
काठमाडौं । पछिल्लाे समय निकै चर्चामा रहेको रियालिटि शो भ्वाईस अफ नेपाल देश बिदेशमा रहेका लाखौ नेपालीको मन जित्न सफल भएको रियालिटि शो हो । शोको दाेस्राे सिचनको ब्लाईण्ड अडिसन चलिरहदा सुरुका १० एपिसाेडसम्म सबैबाट वाहवाहि बटुलेको भ्वाइस ११ एपिसाेडमा भने अालाेचनामा मुछिएको छ ।
११ अौं एपिसाेडमा सिक्किमका नविन गजमेरले शिव परियारको चर्चित गित अाँशुको अर्थ गाइरहदा कोचहरुले गित मन पराइरहेको महशुष गराईरहेका थिए । कोच राजु र कोच प्रमोदले बज गर्छन भन्ने अाशा धेरैले गरेका थिए । विडम्बना नविनले गित सिध्याउदासम्म कोहि कोच फर्किएनन् । अन्त: नविन ब्लाइण्ड अडिसनमा असफल भए । असफल भएपनि कोचहरुबाट राम्राे प्रतिक्रिया भने उनले पाए । नविनले अाफ्नाे केहि कमजाेरि भएको कार्यक्रममै स्विकारेका पनि थिए तर दर्शक स्रोताहरुले भने यतिबेला सामाजिक संजालमा टिकाटिप्पाेणी गरेका छन । धेरैले नविनले राम्राे गाउदा पनि सेलेक्ट नगर्नु दुखद कुरा भएकाे भनेका छन ।
नविन असफल भए लगत्तै स्टेजमा अाईन शृङ्खला जोशी । शृङ्खला सुदुरको चर्चित देउडा राइझुमामा झुमिन । उनलाई कोच अास्ताले बज गरिन । जब कार्यक्रममै कोच अास्ताले : हे भगवान अाफ्नै साथि अगाडि बसेर गाउदै छ कस्ताे अचम्म ? त्यति मात्रै नभएर उनले शृङ्खलालाई तँ भनेर सम्बोधन समेत गरेकि थिईन । उक्त कुरालाई लिएर धेरैले नातावाद किर्पावाद र साथिलाई छनाेट गरेको अाराेप लगाएका छन ।
बिक्रम सुनार र मनुलाई भेट्दा शिशिर भण्डारी भक्कानिएर रुँदा अन्तर्वार्ता लिनै सकेनन् !…
अन्ततः मधु लामा मिडियामा ! साजन लामासँगै मिलेर अघि नबढ्नुको भित्री कारण बताए ( भिडियो…
करेन्ट लागेर दुवै हात गुमाएकी मेघा घिमिरे अमेरिकामा यसरी हात हाल्दै ( भिडियो हेर्नुस…
पूर्व युवराज पारसको भिडियो भाइरल, समर्थकलाई नै थर्काउदै सोनिकासँग हुइकिए ! ( भिडियो…